सुन्दरबजार -२ मा ६६ प्रतिशत मतदान, मतदान केन्द्र नजिकै बम पड्क्याे
लमजुङ जिल्लाको सुन्दरवजार न.पा. २ मा वडाध्यक्ष पदकाे लागि भएकाे निर्वाचनमा सुन्दर नगरपालिका -२ को उप- निर्वाचनमा ६६.३० प्रतिशत मतदान भएकाे छ । कूल २२९७ मतदातामा १५२३ जनाले मताधिकारकाे प्रयाेग गरेका छन् ।
वडाध्यक्ष पदका लागि भइरहेको उपनिर्वाचनमा ५ जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । नेकपाका नवीन श्रेष्ठ , नेपाली काङ्ग्रेसका उमेदवार प्रकास सेढाइँबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । निर्वाचनमा राप्रपा , मङगोल नेशनल अर्गनाइजेसन र एक जना स्वतन्त्र उमेद्वारले उमेदवारी दिएका छन् ।
यसैबीच लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका २ मा वडाध्यक्ष पदका लागि अाज मतदान हुँदै गर्दा मतदान केन्द्र नजिकै बम बिस्फाेट भएकाे छ । मतदान केन्द्रकाे को १ सय ५० मिटर नजिकै टाइम बम बिस्फोट भएको हाे । मतदान केन्द्र महेन्द्र मन्दिर माबि नजिकै टाइम बम बिस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
लमजुङका प्रहरी नायव उपरीक्षक रबिन्द्रमान गुरुङका अनुसार बिहान ९ बजेर ५५ मिनेट जादा बम बिस्फोट भएको हो । बम बिस्फोट भएपनि कुनै क्षती भने भएको छैन । जिल्लामा थप क्षति हुन नदिन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी थप परिचालन गरिएको लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले बताउनु भयाे ।
विप्लव नेतृत्वकाे माअाेवादीले बम बिष्फाेट गराएकाे हुन सक्ने अनुमान गरिएकाे छ । मतदान भइरहँदा बम बिष्फाेट हुँदा स्थानीय मतदाता डराएका थिए । बम बिष्फाेट भएपछि त्यस क्षेत्रमा ब्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएकाे थियाे ।
← भाेर्लेटारमा अाँखा उपचार केन्द्र स्थापना, शल्यक्रिया बाहेक सबै सुवा उपलब्ध
ग्लानी (कथा) →